11:50 am, शुक्रबार, साउन ३०, २०७७
पुजा इन्टरनेशनलले फक्सवागनका गाडीहरु नेपाली बजारमा बिक्री सुरु गरेको १० वर्ष पुरा भएको छ । विश्व प्रसिद्ध जर्मन ब्राण्ड फक्सवागनका गाडी संसारभर निकै लोकप्रिय रहेका छन् । सुरुवाति दुई वर्ष निकै आक्रमक रुपमा नेपालमा आफ्नो बजार विस्तार गरेको कम्पनीले पछिल्ला दिनमा केही कमजोर पर्फमेन्स गरिरहेको छ ।
भारतमा उतपादन गरेका पोलो र भेन्टो तथा जर्मनीबाट आयात हुने टिगुवान, टाेरेकको बिक्री वितरण गर्दै आएको कम्पनीको भावी योजना, सर्भिस, बिक्री सञ्जाल लगायतका विषयमा मेरोअटोले कम्पनीका बिजनेश हेड विशाल घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
फक्सवागन ग्रुपमा तपाईले काम सुरु गरेको केही समय मात्र भएको छ । यसको नेपालमा विगत र आगामी दिनको बाटो कस्तो देख्नु भएको छ ? तपाईको योजना कस्ता छन् ?
विगतलाई हेरेर नै नयाँ योजना बनाउने हो । हाम्रो उत्पादनहरु विश्वस्तरिय छन् । यसमा हामीले धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने अवस्था छैन । हिजो हामीले गरेको काममा के के थप गर्दा हाम्रो बजार हिस्सा बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले केही निष्कर्ष निकालेका छौं ।
विगतमा हामीले सप्लाई चेनलाई धेरै महत्व दिएका रहेन छौं । गाडीको बिक्री बढाउन त हाम्रा सेवा केन्द्रहरुको विस्तार आवश्यक हुने नै भयो । विगतमा भएका केही कमी कमजोरीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा म केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु । भोलिका दिनमा हाम्रा गाडीहरु अझै राम्रा र नयाँ मोडलहरु आउने क्रममा रहेका छन् ।
हिजोका कमजोरी भन्नुभयो । तपाईले देखेका कमजोरीहरु के के हुन् ?
पहिलो कुरा त बिक्री र सेवा केन्द्रहरु हुन् । गाडीको टच प्वाइनट बिना धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई गाडी देखाउन सकिदैन । फेरी गाडी किन्ने ग्राहकले ‘टच एण्ड फिल’ नगरि गाडी किन्दैनन् । हाम्रो सर्भिसका विषयमा पनि ग्राहकको कम्प्लेन थियो । उहाँहरुलाई हाम्रा स्पेयर पार्टस निकै महंगो लाग्छ । तर, वास्तवमा आजका दिनमा सबैभन्दा सस्तो पाटर्स हाम्रो नै छ । यसलाई चिर्नु पर्ने अवस्था छ ।
सुरुमा भारत बाहेकका देशबाट आउने गाडी बिक्री गर्ने हुँदा त्यस्ता गाडीको कुनै नियमित बाहेकका पार्टसमा समस्या आउदा केही समय कुर्नु पर्ने अवस्था थियो । तर, यसलाई कम्पनीले निकै ठूलो सुधार गरेको छ । विगत १० वर्षमा हामीले फक्सवागनलाई नेपाली ग्राहक माझ दरिलोसँग चिनाउन सफल भएका छौं ।
विशाल ग्रुपले पनि पहिलो पटक गाडी ल्याएको थियो । अब लामो अनुभवले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । ग्राहकको गुनासो नआउनेगरि यूरोपियन ब्राण्डलाई नेपालमा बिक्री गर्ने छौं । अहिले हामी ३ वर्षको योजना बनाएर काम गर्दैछौं ।
तीन वर्षको नयाँ योजना तयार गरेर काम गर्दैछौं भन्नुभयो । के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
यो वर्ष हामीले बिक्री केन्द्र विस्तार गर्ने र पार्टस लगायतका समस्या छैन भनेर ग्राहकलाई बुझाउने हो । दोस्रो वर्ष नयाँ मोडल ल्याउने छौं । अहिले हामीसँग ह्याचव्याक पोलो, सेडान भेन्टो र एसयूभीमा टीगुवान छ । सानापछि एकै पटक ठूलो गाडीमात्रै छ । बीचको ग्याप पुरागर्न क्रसओभर एसयूभी ल्याउने तयारीमा छौं । यति काम भएपछि तेस्रो वर्ष नेपाली बजारमा टप फोर ब्राण्डको रुपमा फक्सवागनलाई हामी स्थापीत गर्न सक्छौं ।
तपाईले टप फोरमा पर्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसको लागि बजारमा कतिवटा नयाँ प्रडक्ट आउने छन् ?
अहिले टाइगुन क्रसओभर एसयूभी भारतबाट ल्याउने छौं । यसअघि नेपालमा इन्धनको समस्या भएका कारण तेस्रो मुलुकमा बिक्री भइरहेका गाडी नेपाल ल्याउन सकिएको थिएन । अब हामी कहाँ यूरो-६ मापदण्डको इन्धन आयात सुरु भएको छ । यसले हामी फक्सवागनले संसारको कुनैपनि देशमा उत्पादन गरेका गाडी नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं ।
भोलिका दिनमा हामी चीन, जर्मनी, अमेरिकी देशबाट नयाँ गाडी ल्याउने छौं । अहिले विश्वभर करिब ७५ मोडल भिडब्ल्यूले उत्पादन गर्दै आएको छ । यी मध्ये नेपाल सुहाउदा केही मोडल हामी नेपाल ल्याउने छौं ।
फक्सवागनले हाइड्रोजन फ्यूलसेल प्रोजेक्ट पछाडि धकेलेर इलेक्ट्रीकमा फोकस गरिरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा इलेक्ट्रीक गाडीको संभावना कस्तो छ ?
सरकारले नीतिगत सपोर्ट नगरेको खण्डमा नेपालमा विद्युतीय गाडी ल्याउन सम्भव छैन । यसअघि हामीले फक्सवागनको आइडी-३ नेपाल ल्याउने तयारी गरेर करिब ८० प्रतिशत काम सकेका थियौं । सरकारले एकाएक भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएपछि नेपालमा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । यदि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्ने हो भने भिडब्ल्यूका विद्युतीय कार नेपाल आउने छन् ।
दक्षिण एसियामा नै विद्युतीय गाडीको लागि नेपाल उत्कृष्ट स्थान रहेको र यहाँ गाडीको परिक्षणको लागि पनि वातावरणीय विविधता रहेको कुरा उत्पादक कम्पनीलाई बुझाएर हामीले गाडी ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको समयमा करका दर बढे हामीले योजनालाई नै रोक्यौं । अहिलेकै करको व्यवस्थामा विद्युतीय कार ल्याउन संभव नै छैन ।
हामीले ल्याउन लागेको गाडी ७० लाख हाराहारीमा नेपाल आउने अवस्था थियो । अब यो गाडी नेपाल ल्याउने हो भने १ करोड ५० लाखभन्दा माथि पर्न जाने भएपछि यो योजना रोकेका हौं ।
कोरोना संकटपछि गाडी उत्पादक कम्पनीहरुपनि समस्यामा परेका छन् । यस्तोमा तपाईहरुलाई फक्सवागनले नयाँ केही गाइड लाईन दिएको छ ?
भिडब्ल्यूले नेपाललाई मात्रै हेरर योजना बनाउँदैन । नेपालको हकमा भारतमा उसले बनाएको योजना नै सफलता पूर्वक लागु गर्ने भन्ने हो । भारतबाट गाडी आउन थालेपछि नेपालको बजारमा भिडब्ल्यूको रियल टेष्ट सुरु भएको हो । विश्वमा भिडब्ल्यू पावर, पर्फमेन्स, कम्फर्ट जस्ता विषयमा ध्यान दिएर गाडी बनाउने कम्पनी हो । तर, हाम्रो बजारमा गाडीको मूल्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ । यसैका लागि भारतमा २.० रणनीति निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ ।
अहिले इन्धन कसरी बचत गर्न सकिन्छ भनेर कम्पनीले काम गरिरहेको छ । अबको केही दिनमा नै फक्सवागको १.० लिटर टर्बो (टिएसआई) इन्जिनमा पोलो आउँदै छ ।
नेपालमा टर्बो इन्जिनको विगत सम्झन लायक छैन । अहिले पछिल्लो दिनमा टाटा नेक्सन र हुन्डाई भेन्यू जस्ता मोडलमा प्रयोग भएको टर्बो इन्जिनले केही सफलता पाएका छन् । यस्तोमा तपाईहरुको पोलोले कस्तो बजार पाउला ?
तपाईको भनाईमा नै ग्राहकले टर्बो इन्जिन स्विकार गर्न थालेका छन् । अहिले हाम्रोमा ग्राहकले टिएसआई इन्जिनको गाडी कहिले आउँछ भनेर हामीलाई सोधिरहेका छन् । हामीले पोलोको टिएसआई मोडलको चाँडै बुकिङ खोल्ने तयारीमा छौं ।
बिक्री तथा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सुनाउनु भयो । कति स्थानमा थप गर्दै हुनुहुन्छ ?
यही वर्ष हामीले प्रदेश २ र प्रदेश ५ का केही स्थानमा हामी आउटलेट खोल्छौं । वीरगंज, जनकपुर बर्दिवास मध्येको स्थान र नेपालगंज र सुर्खेत मध्ये केही स्थानमा थ्रि एस सहितको सेवा सुरु गर्नेछौं ।
अहिले हाम्रा बिक्री डिलरहरु विर्तामोड, विराटनगर, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, धनगडी, पोखरा र काठमाडौंमा आफ्नै दुई वटा र एक डिलर मार्फत गाडी बिक्री गर्दै आएका छौं । उपत्यकामा आफ्नो सर्भिस बाहेकपनि हाम्रा पुराना स्टाफबाट संचालन भएका लोकल ग्याराजबाट पनि हामीले सेवा दिदै आएका छौं ।
विटल, टिगुवान, टोरेक जस्ता मोडल ल्याएर स्थापित भएको पुजा इन्टरनेशनलको व्यवसायमा गेम चेन्जर प्रडक्ट कुन हुने देख्नु भएको छ ?
संसारभर नै भिडब्ल्यूलाई बिटलले स्थापित गरेको हो । यसमा संका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन । नेपालमा पनि यसले हामीले स्थापित गरायो । त्यसपछि पोलो र भेन्टोले हामीलाई निरन्तरता दियो । अब हाम्रो गेमचेन्जर प्रडक्टको रुपमा टाइगुन आउने क्रममा रहेको छ । संभवत २०२१ को मध्यसम्ममा यसलाई हामी नेपाल ल्याएर बिक्री सुरु गर्ने छौं ।